10 LinkedIn Mbiri Matipi Ekubudirira Kwako Networking | Martech Zone
10 LinkedIn Mbiri Matipi Ekubudirira Kwako Networking
Svondo, October 11, 2015 Chipiri, January 11, 2022 Douglas Karr
Iyi infographic kubva kuSalesforLife inotarisana nemabatirwo eiyo LinkedIn profile anogona kugadziridzwa kutengesa. Zvakanaka, mumaonero angu, yega yega LinkedIn mbiri inofanirwa kuve yakagadzirirwa kutengesa… zvikasadaro nei uri paLinkedIn? Kukosha kwako muunyanzvi hwako kwakakosha chete sewehunyanzvi network.
Izvo zvakati, ndinotenda vanhu vazhinji vanokanganisa nekushandisa zvisizvo chikuva kana kuti kwete kugadzirisa yavo LinkedIn mbiri. Imwe tsika yandinoda kumbomira kuyedza kushamwaridzana nevanhu vausingazive. Ndinoziva kuti iwe urikutsvaga kuti uwedzere network yako, asi kukokwa kusina chinhu haisiyo nzira yekuita saizvozvo. Batana neni kuburikidza nesocial media, tora hurukuro iende, ndizivise kuti nei kubatana kwauri kungave kuchikosha - uye ndinogona kwazvo kubatana!
Yako LinkedIn profil haifanire kunge iri yako tangazve - hazvisi zvekugona kwako kana nezve kuti wakapwanya sei chikamu. Panzvimbo iyoyo, inofanirwa kuve yevatengi-centric, yakatarisana neiko kukosha kwaunogona kupa kune vangangove tarisiro nevatengi. Pindura uyu mubvunzo: ndingabatsira sei vatengi vangu? Heano maitiro ekugadzira iwo akakwana LinkedIn profile eSocial Selling.
Maitiro Ekugadzirisa Yako LinkedIn Mbiri
Mufananidzo Chaiye - Ini handibatanidzi kumakatuni kana mifananidzo isina chinhu. Chiso chako ndicho chinhu chinonyanya kuzivikanwa chauinacho, chiise online. Ndiri murume achena vhudzi, achembera, akafuta… Ndichiri kuisa mufananidzo wangu pamhepo. Heano mamwe matipi ekuwana yakakura Linkedin profile photo (uye nei vachishanda!).
Musoro Wako Wenyaya - Chinyorwa chinzvimbo hachipe kukosha kwaunounza vamwe. Usapfuure mugungwa uye ndokumbirawo usakanda kuva mamioneya.
Shambadzira Zvemukati - Ipa vashanyi zvirimo zvirimo kwavanogona kuona hunyanzvi hwako mukati meindastiri yako.
ChiPolish Yako Pfupiso - Musoro wako wenyaya wakabata pfungwa dzavo, zvino yave nguva yekupa rumwe ruvara uye kushevedzera kukuru kuti chiite.
Goverana neZvino Zvemukati - Sevashanyi vanoongorora peji rako, ipa zvimwe zvinoonekwa zvinotora maziso uye zvinosiyanisa chimiro chako kubva kune vamwe.
Chiitiko neMhedzisiro - Yako nhoroondo yebasa haina basa zvakada kufanana nemhedzisiro yawakawana munzvimbo idzodzo.
Zvinotsigirwa - Kunyange ivo vakanyanyisa kushandiswa uye vachikosheswa, chimiro chisina zvibvumiridzo hachioneke zvinoonekwa. Tora zvako!
Mazano - Kusiyana nezvibvumirano, mumwe waanoshanda naye anotora nguva kuti agadzire kurumbidzwa kwakakodzera kwakakosha zvakanyanya.
Wedzera Chinyorwa - Uri kugovana nekunyora kumwe kunhu here? Ive neshuwa yekuwedzera izvo zvikamu kune yako LinkedIn mbiri kuitira kuti vashanyi vakwanise kuona hunyanzvi hwako.
Honours & Mubayiro - Tiri kurarama munyika umo kushamwaridzana kwako munharaunda uye munharaunda chinhu chakakosha pakusarudza kuti uri munhu akaita sei. Kana iwe wakazivikanwa, igovana.
Ive neshuwa yekutarisa yako profile sekuonekwa neruzhinji uye nekubatana kuti ugone kunatsiridza nekukwirisa chimiro chako. Kudivi rerudyi, LinkedIn inotopa gauge yesimba rako reprofile… ishandise! Ini ndinokurudzirawo kukwidziridzwa kune yakabhadharwa kunyorera kuLinkedIn. Kunze kwekusiyanisa chimiro chako uye kuwedzera kuoneka kwayo, zvinopa zvishandiso zvikuru zvekuziva kuti ndiani ari kuona chimiro chako uye kuti ungaita sei nekuonana nevamwe.
Tags: infographiclinkedin zvemukatilinkedin zvibvumiranolinkedin ruzivolinkedin musoro wenyayalinkedin optimizationlinkedin pikichalinkedin profilelinkedin mazanokutengesa kwehupenyusalesforlife